Pope Francis họpụtara onye odeakwụkwọ onwe ọhụrụ | Ilblogdellafede
Pope Francis hoputara onye ode akwukwo ohuru
Pope Francis họpụtara onye ọrụ nke nzuzo nke Vatican dị ka odeakwụkwọ ọhụrụ ya na Satọde.
Thelọ ọrụ mgbasa ozi nke Holy See kwupụtara na 1 Ọgọstụ na Nwaafọ 41 dị. Fabio Salerno ga-anọchi Msgr. Yoannis Lahzi Gaid, onye jigidere ọrụ kemgbe Eprel 2014.
Salerno na - arụ ọrụ ugbu a na Ọfịs nke State maka mmekọrịta na ngalaba States, makwaara dị ka Nkebi nke abụọ. N'ime ọrụ ọhụrụ ọ ga-abụ otu n'ime ndị na-eme ka ndị na-eme mmekọrịta chiri anya.
Gaid, onye ụkọchukwu Katọlik Katọlik a mụrụ na isi obodo Egypt nke Cairo, bụ onye mbụ Katọlik Ọwụwa Anyanwụ mbụ rụrụ ọrụ ahụ. Onye dị afọ iri anọ na anọ ga-elekwasị anya ugbu a na ọrụ ya na Kọmitii Elu nke Human Fraternity, otu ahụ guzobere mgbe popu na Grand Imam nke Al-Azhar bịanyere aka na Akwụkwọ Nnabata mmadụ na Abu Dhabi, UAE, na February 45. .
A mụrụ Salerno na Catanzaro, isi obodo mpaghara Calabria, na 25 Eprel 1979. A họpụtara ya ịbụ ụkọchukwu na archdiocese mepere emepe nke Catanzaro-Squillace na Machị 19 Mach.
O nwere akwukwo doctorate na akwukwo iwu nke ndi obodo na nke ulo uka nke Pontifical Lateran University di na Rome. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na Pontifical Ecclesiastical Academy, ọ bụ odeakwụkwọ nke ọgbakọ nkwupụta okwu na Indonesia na nke nnọchi anya nke Holy See nye Council nke Europe na Strasbourg, France.
N'ime ọrụ ọhụụ, Salerno ga-arụkọ ọrụ Fr. Gonzalo Emilio, onye Uruguay onye ya na ụmụaka na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ na-arụ ọrụ. Ndị popu họpụtara Emilio dị ka odeakwụkwọ nke onwe ya na Jenụwarị, na-anọchi Mgsr nke Argentine. Fabián Pedacchio, onye jigidere ọkwa ahụ site na 2013 ruo 2019, mgbe ọ laghachiri n'ọkwa ya na ọgbakọ ọgbakọ ndị bishọp
← Na post gara aga Gara aga post:Ozi nke August 2 na Mirjana, Nwanyị nwanyị anyị na-ekwu okwu na Medjugorje
Ọzọ Post → Post ozo:Nrara nye Santa Brigida na nkwa ise nke Jesus